हस्पिटलसँग जोडिएका ल्याबहरुको पिसिआर रिपोर्टलाई मान्यता दिने राज्यको रणनीतिको तारिफ « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७८, १३ बैशाख सोमबार १५:२१ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार । आर.एस. भण्डारी धुम्बराहीचोकस्थित ह्याम्स हस्पिटलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) पहिचान र उपचारमा विगतदेखि नै ह्याम्स हस्पिटलले खेलेको भूमिका निकै तारिफयोग्य छ । कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरअन्तर्गत यतिखेर हस्पिटलमा कोभिडका बिरामीहरुको चाप अत्यधिक छ । अस्पतालमा ८० वटा वेड त कोभिड बिरामीहरुले भरिभराउ छन् । सिकिस्त अवस्थाका बिरामीहरुलाई सुरक्षित रुपमा नयाँ जीवन दिन सफल भएको छ हस्पिटल । यसमा हस्पिटलका दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक टेक्नोलोजी र आधुनिक भौतिक संरचनाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । जनस्वास्थ्य सरोकारले अध्यक्ष भण्डारीसँग कोभिड—१९ कोरोना भाइरस उपचार र व्यवस्थापनबारे लिएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
कोभिड उपचारमा अस्पतालको भूमिका बताइदिनुस् न ?
मुलुकमा कोभिडको प्रकोप बढ्दै जाँदा शुरुका दिनहरुमा कोभिड बिरामी उपचार गर्ने ह्याम्स पहिलो निजी अस्पतालको रुपमा परिचित भयो । त्यो बेलामा कतिपयको आलोचना पनि खेप्नुपर्यो । महामारीको समयमा हाम्रो सौभाग्य भनौ वा त्यो बेलाको हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व थियो । यसमा ‘दुःखको घडीमा सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने मानवीय नाता जोडिएको छ । साथै मुलुकमा अत्याधुनिक अस्पताल सञ्चालन गर्दाको धर्म पनि हो । यद्यपी हामी कहिल्यै पनि कोभिड बिरामीको उपचारमा चुकेनौं र चुक्नेवाला पनि छैनौं । त्यो बेला अस्पतालको पूरै टिमले उपचारमा सक्रियता देखायो । निकै राम्रो सफलता हाँसिल गर्यौं । आजको कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरमा पनि हामी त्यति नै सजग र सक्रिय रुपमा बिरामीको उपचारमा लागिपरेका छौं । हाम्रो अभियानमा राज्यको पनि साथ र सहयोग रहेको छ ।
कोभिड उपचारमा हामी सफल हुँदै गर्दा ह्याम्समा सिकिस्त र अन्तिम अवस्थाका कोभिड संक्रमित बिरामीहरुलाई दक्ष चिकित्सकहरुको टिम र टेक्नोलोजीको माध्यमबाट नयाँ जीवन दिन सफल भएका छौं । यो कुरा सेवाग्राहीको फिडव्याकको आधारमा हामीले बताइरहेका छौं । बाँकी पब्लिक भ्वाइस तपाईंहरु मिडियाकर्मीले क्रस चेक गर्ने कुरा हो ।
यद्यपी ह्याम्स हस्पिटलले स्वास्थ्य संकटको बेलामा देश र जनताको हितलाई सर्बोपरी ठानेर कुनै पनि बद्मासी र ह्याङ्की फ्याङ्की नहुने गरी जिम्मेवार भूमिका निभाएको कुरा निर्धक्कसाथ बताउँछु ।
वितगमा कोभिडका बिरामीहरु घट्दै र बढ्दो अवस्थामा रहेका अन्य रोगका बिरामीहरुहरुको सफल उपचार गर्न पाउँदा हामी खुशी हुँदै थियौं । फेरि अहिले दोस्रो चरणको महामारी अन्तर्गत २ हप्तादेखि हस्पिटलमा कोभिडका बिरामीहरुको चाप बढिरहेको छ ।
यसरी अस्पतालमा कोभिड बिरामीहरुको चाप बढिहरदा पहिलाको अनुभवलाई आधार मानेर ११ वटा एचडिउ लेवलको वेड र ९ वटा डेडिकेटेड आईसियू वेड थप सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएका छौं । अहिले हस्पिटलमा कोभिडका लागि मात्र भनेर ८० वटा वेड छुट्याएका छौं । कोभिड आईसियू वेड मात्र २१ वटा छन् । सबै वेड शत्प्रतिशत भरिभराउ छन् । स्थिति अझ भयावह हुने अवस्था छ । स्थिति राम्रो छैन । हामीलाई कोभिडका लागि वेड उपलब्ध गराइदिन हरेक पटक धेरै व्यक्तिको आग्रह आउने गरेको छ । हामी सबै मिलेर होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्छ ।
अहिले कोभिड परीक्षणबारे राज्यले अपनाएको रणनीतिबारे के भन्नुहुन्छ ?
अहिले राज्यले हस्पिटलसँग जोडिएका ल्याबहरुको पिसिआर रिपोर्टलाई मान्यता दिने रणनीति अपनाएको छ । यो निकै तारिफयोग्य छ । यसले क्वालिटी मेन्टेन र कुनै बदमासी हुन पाउँदैन । यो राज्यको इज्जतसँग पनि जोडिएको विषय हो ।
कोभिड व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छौं ?
धेरै दिनदेखि ज्वरो नियन्त्रण नभएकाहरुका लागि फिवर क्लिनिकबाट सेवा दिइरहेका छौं । इमर्जेन्सी विभागमा हामीसँग भएका कन्सल्टेन्सी चिकित्सकहरुले सिकित्स बिरामीहरुलाई सेवा दिइरहेका छौं । सकेसम्म आफ्नै हस्पिटलमा बिरामी निको पार्ने कोशिस गर्दछौं । उपचार प्रक्रिया राम्रो छ । ह्याम्सले नभ्याएमा अन्य हस्पिटलसँग समन्वय गरेर वेड खाली भएका अस्पतालहरुमा रिफर गर्दछौं । टेष्ट गर्दै गर्दा हस्पिटलाईज गर्नु नपर्ने खालका बिरामीहरुलाई वेसिक मेडिसिन उपलब्ध गराएर होम आइसोलेसनमा बस्न सल्लाह दिन्छौं ।
कोभिड महामारी न्युनिकरणका लागि सम्बन्धित निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिलेको यो कोभिड महामारीमा निजी र सरकारी नभनी सानादेखि ठूलासम्म सबै एम्यवद्ध र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । यसले राम्रो परिणाम निस्कन मद्धत गर्छ । कोभिड महामारीविरुद्ध राज्य र निजी क्षेत्र दुवै एकजुट भएर लड्नुपर्छ । यसलाई जसरी पनि कम क्षतिमा पार लगाउनुपर्छ भन्ने सबैको सोच र भिजन हुनुपर्छ ।
ह्याम्स हस्पिटलले आफ्नो साधन र श्रोतले भ्याएसम्म अहोरात्र खटेर सेवा दिन एकरति पनि कमी नगरी कोभिड पहिचान र उपचारमा लागिरहेको छ । राज्यले कुनै दायित्व दिएमा हामी चुक्दैनौं । राज्यसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।
लकडाउनबारे के भन्नुहुन्छ ?
लकडाउन अन्तिम अस्त्र हो । लकडाउनले मान्छेको गरिखाने माहौल तहस नहस अवस्था बन्छ । लकडाउनले नै सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । तर पनि समयले लकडाउनको माग गरेमा त्यतातिर पनि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । आखिर जनताको जिउ धनको सुरक्षा त चाहिन्छ नै ।